Author: Mazusar Nakora
Somalilane aadamuhu waa deeq llaahay, waana qaali; qof kastaana wuxuu xaq leeyahay noloshiisa, wuxuuna ku waayi karaa oo keliya marka maxkamad horteed uu ku caddaado dembi uu xeerku jideeyey in dil lagu mutaysan karo. Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha waxa Iagu dhaarinayaa ka hor intaanay xilka la wareegin xaflad ay goob joog ka yihiin Madaxda Golayaasha Wakiilada iyo Guurtida iyo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare.
Midnimada dalka Israacsanaanta dhul-ahaaneed. Xubinta Golaha Guuridu waxa ay waayi kartaa xubinnimadeeda haddii ay burto shuruud ka mid ah shuruudihii Iagu soo xushay, ama ay gudan waydo xilka sida uu u caddaynayo xeer -hoosaadka Golaha Guurtidu. Saraakiisha sare ee kale oo xeer ka soo baxay Golayaasha Xeer-dejintu awood u siinayo magacaabistooda iyo xil-ka-wareejintooda. Golaha waxa ku waajib ah inuu hubiyo in tallaabada laga qaaday xubinta ay tahay mid toosan.
Dawladdu waxay xil iska saaraysaa caafimaadka, daryeelka, xannaanada iyo waxbarashada hooyada, dhallaankanaafada cid xannaanaysa aan lahayn iyo dadka aan xiskoodu dhammayn ee aan lahayn awood iyo cid kafaalaqaada. Cidhib tirka akhris-qoris la’aanta iyo waxbarashada dadka waaweyni waa waajib ummadeed waana in shacab iyo Dawladba awood Ia isugu geeyo fulinta waajibkaas.
Maxaa ka dhalan kara ka bixitaanka ciidammada Mareykanka ee dalka Suuriya? Inuu yahay muwaadin, maskax ahaan iyo jidh ahaanba u gudan kara somaloland. Dejinta xeerarka ku saabsan Diinta, dhaqanka iyo nabadgelyada. Waxyaabaha ka Reebban Xubnaha.
Golaha Wakiilada ayaa oggolaanaya gelidda kharash kasta oo aan miisaaniyadda ku jirin. Isu Celinta Eedaysanayaasha Ama Dembiilayaasha iyo. Waa inuu Muslim yahay, kuna dhaqmaa Diinta lslaamka.
Khilaafka Diiniga ah ee abuurma. Magacaabidda iyo xil-ka-wareejinta xubnaha Golaha Wasurada. Muwaadin kasta wuxuu xor u yahay inuu abaabulo kana qayb qaato, kulan ama bannaan-bax nabadeed oo xeerka waafaqsan.
Saxeexa heshiisyada caalamiga ah. Haddii doorashada Golaha Wakiiladu ku qabsoomi weydo duruufo adag awgeed, Golaha hore ayaa xilka sii haynaya inta ay ka dhamaanayso duruuftaasi, lagana dooranayo Gole cusub. Haddli gobollada iyo degmooyinku ay muddo domaliland bilood ah gudahood ku dhisan waayaan golayaal, Xukuumadda-dhexe waxay ku meel dastuurja ahaan u magacaabaysaa maamulo gobolo iyo degmooyin iyadoo kala tashanaysa xubnaha Golaha Wakiilada iyo Golaha Guurtida ee metala gobolladaas iyo degmooyinka iyo weliba guurtida degaamadaas.
Hay’adda Shaqaalaha Dawladda 4. Haddii ay burto shuruud ka mid ah shuruudihii xubinnimada.
Awoodda Garsoorka u Gaarka ah. Taliyayaasha ciidamada iyo Ku-xigeenadooda; r. Haddii aftida Qaranku taageeri weydo kala diridda Golaha Wakiilada, ama doorashadu qabsoomi waydo, Golihii hore ayaa xilka haynaya. Xukun dembi ah oo xilka lagaga xayuubiyey. Maamuulka Gobollada iyo Degmooyinka.
Xabsigu waa edbin iyo toosin. Fadhiga Golaha Wakiiladu waxa uu ku furmi karaa marka ay sonaliland kala badh in ka badani, marka laga reebo kuraasida bannaanshahooda Ia baahiyay. Xaaladaha xeerku tilmaamyo Qaranku wuxuu kafaalo qaadayaa inuu bixiyo difaac lacag la’aan ah; iyada oo saboolkana laga dhaafi karo ajuurada maxkamadda.
Taasi waxaa xigay dastuurka Somaliland ugu horeeyay, taas oo la ansixiyay ee shirka ee Beelaha Somaliland ee Hargeysa ee February Ku xad gudub Dastuurka. Waxa reebban in laga jeediyo waxyaabaha ummadda kala kaxayn kara; dawladduna waxay ku leedahay ilaalin guud iyo kaalmayn wixi suurto-gal ah. Mashruuc-sharci kasta aan ahayn kuwa Maaliyadda. Baadhaha waxa dasturka reebban ku xad-gudubka amarka garsooraha.